‘लिक्युइड’मा सोनिका रोकायमाथि पूर्वयुवराज पारसको झापड बर्सियो ! « Kathmandu Pati
प्रकाशित मिति : २०७६, २९ कार्तिक शुक्रबार १२:२६
काठमाडौं – सोनिका रोकाया पछिल्लो समय पूर्वयुवराज पारस शाहसँग देखिन्छिन्, काठमाडौंदेखि पोखरासम्म, नाइट क्लबदेखि हेलकप्टरसम्म । बेलाबेलामा उनीहरूका तस्वीर तथा भिडियो पनि भाइरल हुन्छन् । आखिर कसरी पारससम्म पुगिन् त सोनिका ? त्यसको पनि अलग्गै किस्सा छ ।
पारसका दर्जनौं एकाउन्टमध्ये एउटामा म्यासेज लेखिन्, ‘म विजनेस पर्सनालिटीर भिजे हुँ, मेरो दरबारमार्गमा आफ्नै लाउञ्ज छ । आइ वुल्ड लाइक टु वेलकम यु आवर लाउञ्ज । इफ पोसिबल प्लिज कम ।
पारसको फेसबूकबाट रिप्लाइ आयो, ‘ओके ।’ तर, पारसका नाममा फेसबूकमा दर्जनौं एकाउन्ट छन् । सोनिकाको आश त जाग्यो तर भर पर्न सकिनन् ।
‘त्यसभन्दा अघि मैले पारस सरकार को हो भनेर चिनेकी पनि थिइनँ । यो भाग्यको खेल हो ?’ उनी भाग्यप्रति अनुग्रहित देखिइन्, तर पनि सोनिकालाई पूर्णविश्वास भने अझै भएन ।
तैपनि उनी पहिलोपटक पारसलाई देखाउनकै लागि सिल्क साडीमा सजिइन् ।
सोनिकाको वास्तविक नाम पूजा रोकाया हो ।
पारस उनको लाउञ्जमा पुग्नुअघि अननोन नम्बरबाट कल आयो, ‘हामी हिँड्यौं ।’
अन्नपूर्णमा भेटेको कुरा त बजारमा गसिप बन्न थालिहाल्यो । त्यो गसिपपछि केही समयसम्म दुवै नबोलेको उनी बताउँछिन् ।
त्यसपछि अर्को भेटका लागि पारसले नै आग्रह गरे, ‘लेट्स मिट अगेन ।’
बाक्लिँदो भेटघाटले मेलमिलाप पनि बढायो ।
लिक्युइडमा सोनिका वाइल्ड रूपमा प्रस्तुत हुन्थिन् । झ्याप्प केटाहरू समात्ने, मस्तसँग डान्स गर्ने ।
पारसको क्रोध सोनिकामाथि बर्सिएपछि रौनकमा डुबेको लाउञ्ज शान्त भयो । पारस भने फटाफट निस्किएर आफ्नो बाटो लागे ।
त्यसयता पारसको संगतले आफूमा धेरै परिवर्तन आउन थालेको सोनिका बताउँछिन् ।